The Irrawaddy's Blog: ဆန္ဒသဘောထား ကောက်ယူခြင်း
Showing posts with label ဆန္ဒသဘောထား ကောက်ယူခြင်း. Show all posts
.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဇွန် ၁၃-၃၀ ဥရောပခရီးစဉ်တလျှောက် ဟောပြောချက်၊ ဆွေးနွေးမှု၊ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ မြန်မာပြည်ကို Burma လို့ပဲ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးစဉ်အဆုံးသတ်ချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဒီအကြောင်းကို သတင်းစာကတဆင့် အများသိအောင် သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမည်ဖော်ပြတဲ့အခါ Burma အစား Myanmar လို့သာ သုံးနှုန်းဖို့ NLD ကို အသိပေး အကြောင်းကြားထားပါတယ် တဲ့။ဒီအကြောင်းကြားစာကြောင့် Burma - Myanmar ဝေါဟာရ ငြင်းခုန်မှုတွေ ပေါ်ပါတယ်။စာဖတ်သူကရော ဘယ်လို သုံးမလဲ လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဧရာဝတီ ဘလော့မှာ စစ်တမ်း ကောက်ခဲ့ပါတယ်။သဘောထားပေးမှု ၂,၀၀၈ ခု ပါဝင်တဲ့ စစ်တမ်းရလဒ်က ဒီလိုပါ -အခြေခံဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း Myanmar လို့ သုံးမယ်။ ၅၃၆ (၂၆%)နိုင်ငံအမည်ပြောင်းချိန်မှာ လူထုကိုမတိုင်ပင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့် Burma လို့ ဆက်သုံးမယ်။ ၁,၃၄၉ (၆၇%)ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။ ၁၀၈ (၅%)ဒီမနက် ရန်ကုန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)ဒီကနေ့ NLD ရုံးချုပ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ Burma - Myanmar အကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။“ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး။ ... ကျမ သုံးချင်သလို သုံးလို့ရတယ်လို့ မြင်တယ်” တဲ့။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက် ချက်ချင်း ထွက်မလာသေးပါဘူး။ သိပ်မကြာခင်မှာ တခုခု တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။.
ပြန်သင့် မပြန်သင့် ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ခေါ်သည့်အတိုင်း ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာများ ....
ပြန်လာသင့်သည် 281 (11%) အလျင်စလို မပြန်သင့် 432 (17%) အာမခံချက်ရှိအောင် အရင် တောင်းဆိုပါ 1370 (55%) မပြန်သင့် 378 (15%) Votes so far: 2461
ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံက ပျော်စရာအကောင်းဆုံး ဖြစ်မလဲ။အဖြေကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ် တဲ့။ဒါ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်တဲ့ စစ်တမ်းကို ကိုးကားထားတာပါ။ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကြီးမြတ်သော မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက အခုမှ ဧပရယ်ဖူးလုပ်တာလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အမှန်တကယ်၊ တရားဝင်၊ အတည်အတံ့၊ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်တဲ့ ရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ပျော်စရာအကောင်းဆုံး နိုင်ငံတရုတ် ရဲ့ နောက်မှာ မြောက်ကိုရီးယား၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဗင်နီဇွဲလား တို့ လိုက်ပါတယ်။ အေးချမ်းသာယာတဲ့နိုင်ငံ ၅ ခုပေါ့ဗျာ။အမေရိကန်၊ တောင်ကိုရီးယားတို့ကတော့ နောက်ဆုံးမှာ ရှိနေပါတယ် တဲ့။ အီတလီသတင်းဌာန Corriere Della Sera က သောကြာနေ့မှာ သို့ကလို သတင်းပို့ပါတယ်။ဆက်ရေးထားတာက တရုတ်ပြည်ဟာ စစ်တမ်းမှာ အမှတ် ၁၀၀ ရတယ်ဆိုပြီး မြောက်ကိုရီးယားရုပ်မြင်သံကြားက ထုတ်လွှင့်သွားပါသတဲ့။ မြောက်ကိုရီးယားက ၉၈ မှတ်ပဲ ရလို့ ဒုတိယအဆင့်နဲ့ ကျေနပ်ရ ဆိုပဲ။တောင်ကိုရီးယားက ၁၈ မှတ်ပဲ ရလို့ အဆင့် ၁၅၂ ကို ရောက်သွားရှာတယ်၊ အမေရိကန် ဆိုရင် အဆင့် ၂၀၃ တဲ့။"စစ်တမ်း ရလဒ်ကို အမေရိကန်တွေဆီ ပို့လိုက်စမ်းပါကွာ၊ ဒါမှ ဒီကောင်တွေ နည်းနည်းပါးပါး ခံစားသွားရအောင်" လို့ တရုတ်ပြည်က တယောက် မှတ်ချက်ပေးတာကို Facebook မှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်က အဆင့် ဘယ်လောက် ချိတ်မလဲ မသိရသေးပါ။ သိရင် လက်တို့ပါအုံး လို့ ကိုရီးယားစာ ဖတ်တတ်သူများ၊ အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေရေး ကျွမ်းကျင်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။စစ်တမ်းက စိတ်ချရပါ့မလား။ အင်း - ယုံရမှာပါ။သူ့ကိုယ်သူ နံပတ် ၁ နေရာမှာ မထားဘူး ဆိုတော့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ စစ်တမ်းက သမာသမတ်ကျမယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ကဲ -သွားကြမလား ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံတွေဆီကို။ကိုးကား - http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4078010,00.html
အစိုးရသစ်အပေါ် မျှော်လင့်ချက် ၁၈/၈၁
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရသစ်သည် နိုင်ငံအတွက် အပြောင်းအလဲကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်သည် (၃၆၉ မဲဖြင့် ၁၈%)၊ ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဟု လုံးဝ မမျှော်လင့်ပါ (၁၆၅၅ မဲဖြင့် ၈၁ %)။(Photo - AP)
၂၀၀၈ နှစ်ကုန်ပိုင်း ဧရာဝတီ တိုက်ထိုင် သတင်းထောက်တွေ၊ အယ်ဒီတာ နဲ့ အော်ဒီတာတွေ ပြီးတော့ ၀က်မာစတာတို့ မန်နေဂျာတို့လည်း ပါတယ်၊ ချင်းမိုင်မြို့ပြင် တနေရာမှာ စကားဝိုင်းဖွဲ့တယ်။ သတင်းသမားကောင်းတယောက်မှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေအကြောင်း ပြောဖြစ်တယ်။ အယ်ဒီတာတွေ၊ စာတည်းတွေ၊ သတင်းထောက်တွေကို သတင်းသမားတဦး လို့ အမည်ဝှက် ပေးလိုက်မယ်။ ဒီစာကို ဖွင့်ချတာ သူတို့ နဲ့မတိုင်ပင်ထားလို့အဲဒီလို လုပ်ရတာပါ။ ကဲ - ဖတ်ကြည့်ပါအုံး အဆိုအမိန့်များကို။
သံသယ ရှိရမယ်။ အကြောင်းအရာတခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် နားလည်ရမယ်။
စပ်စုတတ်ရမယ်။ (ဆရာကြီး ဇာနည်ဝင်း)
များများလေ့လာရမယ်။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုယ်မြင့်တင်ရမယ်။ (self improvement)
ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရမယ်။ (သတင်းသမားတဦး) ခေါင်းရှင်းဖို့လိုတယ်။
လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်၊ ယူဆတတ်ရမယ်။
စည်းကမ်းရှိရမယ်။ Organize ဖြစ်ရမယ်။
ပြတ်ပြတ်သားသား ရေးဖို့လို။ (၀က်မာစတာတယောက်)
(မှတ်ချက် - ဆရာဝက် ပြောတဲ့ အချိန်တန်ဖိုးထား ဆိုတာက ဒီလိုပါ - သတင်းတွေ ရုံးပိတ်ချိန်နီးမှ သူ့ ဆီ ရောက်လာရင် သူလည်း အိမ်ပြန် နောက်ကျတယ်လေ၊ ဒါကြောင့် သူက တန်ဖိုးထားခိုင်းနေတာ။ သူက သတင်းရေးသူ မဟုတ်တော့ အချိန် တန်ဖိုးထားမထား တွေ့မှ မေးကြည့်ရအုံးမယ်း)
မြင်တတ်ဖို့လို။ (သတင်းမရေးသူ တဦး)
သတင်း scene ရှိရမယ်။
စိစစ်တတ်ဖို့လို။ (သတင်း မရေးသူ တဦး)
အမှန်တရားပြောရဲဖို့လို။ (ဒါလည်း သတင်းမရေးသူပါပဲ)
Inform citizen ဖြစ်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးဖို့လို။
ဒါပါပဲဗျာ။ ဧရာဝတီဘလော့မှာ ဒီရက်ပိုင်း အသစ် မတွေ့တာနဲ့အဟောင်းတွေထဲက တပါးသူ မသိသေးတာတွေကို ဖောက်ချလိုက်တာပါ။
ဘလော့မှာ ပုံမှန် လက်ဆော့သူတွေလည်း ဒီရက်ပိုင်း ယူနီကုဒ်နဲ့ ခေါင်းကုတ်သူ၊ ဟန်းနီးမွန်းထွက်သူ၊ စနေတနင်္ဂနွေရသကို အပြည့်အ၀ခံစားသူတွေ ဖြစ်နေဟန် ရှိပါတယ်။ မနက်ဖြန် တနင်္လာမှာတော့ ပုံမှန် ရေးကြ တင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ။
ကမ္ဘာကျော် တင်းနစ်မယ် မာရီယာ ရှာရာပိုဗာ ဟာ အားလပ်ရက်အတွင်း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Los Cabos မှာ ရောက်နေပြီး ဘီကီနီ ဝတ်ထားတဲ့ သူ့ ဓာတ်ပုံတွေ ပေါ်ထွက်...
ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့က အိမ်ရှင် ဘရာဇီး နဲ့ ဂျာမနီ အသင်းတို့ ကစားခဲ့ကြရာမှာ ပထမပိုင်းပွဲစဉ်အချိန်မှာ ဂျာမဏီက ဘရာဇီးကို ၅ ဂိုးအပြတ်ရနေခဲ့ပါတယ်။ အ...
နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက် သံကြိုးတွေ၊ သံချွန် ထူးတွေ ခတ်ခံထားရပြီး နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံက ရာဂျုးလို့ အမည်ရတဲ့ ဆင်ကို ကယ်တင်ေ...